မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ဖြစ်တည်မှု-ဇာတ်သိမ်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ဖြစ်တည်မှု-ဇာတ်သိမ်း	42
- La Yeik
Posted by La Yeik on Dec 5, 2014 in Creative Writing, Drama, Essays.. | 42 comments
အိမ်ပြန်ရောက်မှ အခန်းတွင်းသို့ဝင်ကာ သားကို သိပ်ပြီး မှ နွယ် အားရပါးရငိုသည်။
မောင့်ကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပဲမေးရကောင်းမလား …အို ဒါပေမယ့် မောင့်နှုတ်က ဟုတ်ပါတယ်လို့ ၀န်ခံမှာကိုတော့ အရမ်းကြောက်တယ်
နွယ့်မှာ ဘာအပြစ်များရှိလို့လဲမောင်ရယ်….နွယ် အိမ်ထောင်ထိန်းသိမ်းတာ ညံ့နေလို့လား…မောင့်ကို မပြုစုမိလို့လား
ဒါမှမဟုတ် နွယ် မလှတော့လို့လား…
နွယ် မှန်တင်ခုံရှေ့ထိုင်က မိမိမျက်နှာကို ငေးကြည့်မိသည်။
မောင့်နှင့်သားလေးသာ အဓိက ဆိုပီး ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဂရုမစိုက်မိတာ ကြာလို့လားတော့မသိ…
မျက်နှာက ရှိရင်းစွဲထက် ပိုရုပ်ကျနေသလိုပဲ…
ဟိုကောင်မလေးတွေပြောတာတော့ မောင်အခုတွဲနေတဲ့ ကောင်မလေးက အလန်းလေးတဲ့…
သူနှင့် ယှဉ်ရင်တော့ နွယ်က အဖွားကြီးဖြစ်နေပီလား…
မောင်ပဲ အရင်ကတော့ သဘာဝအလှမို့ ချစ်တာပါဆို…အခု ဆေးဆိုးပန်းရိုက်တွေ ကြိုက်နေတက်ပီလားကွယ်…
ဆံပင်အရှည်ကို မပြုမပြင်နဲ့ ဆံညှပ်နှင့် ကောက်လိပ်တာများတော့ ဆံပင်က လိမ်နေသည။်
အရင် အလုပ်လုပ်တုန်းက တော့ နဲနဲ ပြုပြုပြင်ပြင်နေသေးသည်။
အခုတော့ မောင့်နှင့် သားလေး ဝေယျာဝစ္စ၊အိမ်ဗာဟီရများနဲ့ မို့ နဂိုကလည်းအလှအပ သိပ်စိတ်မ၀င်စားသော
နွယ့် မှန်တင်ခုံမှာ ပရိုမီနာ မိတ်ကပ်တစ်ဘူး နှင့် သနပ်ခါးတုံးများမှလွဲပြီးဘာအလှပြင် ပစ္စည်းမှ ရှိမနေပါ။
နွယ့်ရုပ်ရည်က သာမာန်ရွက်ကြမ်းရေကြိုပေမယ့် အရည်လဲ့နေသော မျက်လုံးလေးများနှင့် သဘာဝအတိုင်းထူထဲနေသော
မျက်ခုံးမွှေများက နွယ့်အလှကို ပံ့ပိုးပေးထားသလို ၀ါဝင်းနေသော အသားအရေ က ဘုရားပေးထားတဲ့ဆုတခု အဖြစ် နွယ်
ပိုင်ဆိုင်ထားသည်။ကလေးတစ်ယောက်အမေပေမဲ့ နေ့စဉ် အိမ်မှုကိစ္စများကို လုပ်နေလို့လားမသိ နွယ်ကိုယ်လုံးက ကလေးမွေးပီးသူတယောက်လို
ပုံပျက်ပန်းပျက် ဖြစ်မနေတာကိုပင် ကျေးဇူးတင်ရမည်။နွယ့်ဘက်မောင်ပြန်ယိမ်းလာအောင် နွယ်ကြိုးစားခွင့် ရှိသေးရဲ့လားမောင်…
မောင့်ကို လည်း လက်လွတ်ဆုံးရှုံးမခံနိုင်သလို သားလေး ကိုလည်း မိတကွဲ၊ဖတကွဲ ဘ၀မှာ မကြီးပြင်းစေချင်ပါ….
မောင့်အပြစ်တွေက နွယ့်အဖို့ နာကျင်ရပေမဲ့ နွယ် ခွင့်လွှတ်နိုင်အောင် ကြိုးစားရဦးမည်။
ထုံးစံအတိုင်း နောက်ကျမှ မောင်ပြန်လာသည်။
“ကားတွေအရမ်းကျပ်လို့လား မောင်…အခုတလော ပိုပိုနောက်ကျလာတယ်နော်“
“အခုပဲ ဆော့နေတာ…သူ့ဖေဖေကိုမျှော်နေတာ နေမှာ…သိပ်လို့ကို မရဘူး“
“ဟုတ်လား ပေးပေး မောင်သိပ်လိုက်မယ်“
“ထမင်း အရင်စားပါဦးမောင်ရဲ့..အလုပ်မှာလဲ ပင်ပန်းလာတဲ့ဟာ“
“ထမင်းက စားပီးသွားပီ နွယ်…ရုံးက တစ်ယောက် မွေးနေ့ ရှိလို့ ကြိတ်လာတာ“
သားကို သီချင်းဆိုသိပ်နေသော မောင်က အခုတော့လဲ သူမဟုတ်သလိုပါပဲလား…
မောင် ဘာလို့ နွယ်တို့ရဲ့ သာယာတဲ့ မိသားစုလေးကို ဖျက်ချင်နေတာလဲကွယ်..
မောင့်အတွက် ပြင်ထားသော ထမင်းဝိုင်းကို သိမ်းရင်း နွယ် မျက်ရည် ပါးပြင်ပေါ်သို့ ကျလာသည်။
“သားအိပ်သွားပီ နွယ်…မောင် ရေချိုးလိုက်ဦးမယ်“
ညအိပ်ရာဝင်တော့ မောင့်ကို ပြောလိုက်သည်။
“မအိပ်သေးဘူး နွယ် ပြော“
“နွယ် နယ်က အဒေါ်တစ်ယောက်ကို ဒီခေါ်ချင်လို့“
“ဘာလို့လဲ နွယ်က ခေါ်ချင်လို့လား“
“ အင်း အဖော်လေးဘာလေး ရအောင်ပါ“
ပထမအဆင့်အောင်မြင်သွားသဖြင့် နွယ်ပြုံးလိုက်သည်။စောင့်ကြည့်လိုက်ပါမောင် နွယ်က မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ဖြစ်တည်မှု၊မိခင်တစ်ယောက်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုကို
ဘယ်နည်းနဲ့မှ အဆုံးရှုံးမခံဘူးဆိုတာ…နွယ့်ယောကျာ်းကို လုယူမယ့်မိန်းကို နွယ်ပြန်အနိုင်ယူပြမယ်….အဲဒီအတွက်တော့ အရင်းအနှီး နည်းနည်းတော့ စိုက်ရမှာပေါ့လေ
အမေ့ဘက်မှတော်စပ်သော နယ်မှ ဆွေမျိုးနီးစပ် အဒေါ်အပျိုကြီးကို ခေါ်လိုက်သည်။သားလေးအတွက်စိတ်ချရအောင်ပါ ကျန်တာကနွယ့်ဘာသာလုပ်နိုင်သည်။
နွယ်ဈေးသွားသည့် အချိန်၊အပြင်သွားသည့် အချိန်တွေမှာ အဒေါ်နှင့် စိတ်ချလက်ချ ထားခဲ့လို့ရသည်။အိမ်အတွက်လည်း စိတ်ချရသည်။
ကျန်တာတွေက နွယ့်ဘာသာ လုပ်သွားသည်။သားလေးအိပ်သည့်အချိန်မှာတော့ အဒေါ်ကလည်း သူတက်နိုင်တာ ကူရှာပါသည်။
အဒေါ်ကို နှစ်ပတ်လောက် အသားကျအောင် သင်ပြပြီးသည့်နောက် နွယ် ဒုတိယအဆင့်ကို စတင်လိုက်သည်။
ခမ်းနားသည့် ဆိုင်းဘုတ်အောက်မှ တံခါးကို အသာတွန်းဖွင့်ပြီး နွယ်ဝင်ခဲ့သည်။
“ဟိုလေ အမမျက်နှာနဲ့ လိုက်မယ်ထင်တဲ့ပုံလေးလုပ်ပေးပါလား…အခုပုံက အရမ်းရိုးနေသလားလို့“
“ဆံပင်ကတော့ အရှည်ကြီးနော် မနှမျောတာ သေချာတယ်နော် အမ“
“အင်းဖြတ်လိုက်တဲ့ ဆံပင်ကို ပြန်ရောင်းမယ် ညီမ ဘုရားလှူလိုက်မယ်“
“ကောက်မလား ဖြောင့်မလား အမ“
“ညီမ ကောင်းသလိုသာ လုပ်ပါကွယ်“
“အိုကေ အမ လှစေရမယ် စိတ်ချ ကဲ ခေါင်းအရင်လျှော်မယ်နော်“
အရင်က ကိုယ့်အိမ်မှာ ကိုယ်လျှော်၊ပီးတာနဲ့ ရေခြောက်အောင် သုတ်မအားပဲ ဘီးစပတ်ပတ်လိုက်တာများသည်။
အခုလိုဆိုတော့လည်း ငွေက မျက်နှာကြီးသား၊သူများ လုပ်ပေးတာကို ဇိမ်ရှိရှိနှင့် နွယ်ခံယူလိုက်သည်။
“ကဲ အမ ခုံပေါ်ပြောင်းထိုင်ရအောင်“
တဖျတ်ဖျတ်နှင့် ကြမ်းပြင်ပေါ်သို့ကျလာသော ဆံပင်များအား အဓိပ္ပါယ်မဲ့စွာ ငေးကြည့်မိသည်။ထို့နောက် Hair Designer လုပ်သမျှကို မျက်စိမှိတ်ပြီးသာ
ခံယူလိုက်သည်။စုံတော့စုံသည် ဘာတွေ လုပ်မှန်းမသိ ပူလိုက်၊အေးလိုက်နဲ့ သူခေါင်းစောင်းဆို စောင်းပေးလိုက်သည်။သူပြောသမျှ ခေါင်းကို အလိုက်သင့်
“ အမ ကြည့်ကြည့်ဦး ဘာလိုလဲ ပြောနော်“
“အို မယုံနိုင်စရာ ..ဒါဟာ နွယ်တဲ့လား“
မှန်ထဲမှ နွယ်သည် အရင်လို ဆံပင်အရှည်ကြီးနှင့် ခပ်တုံးတုံးနွယ် မဟုတ်တော့။
ကော်ဖီရောင် ဆံပင် အခွေအလိပ်လေးများသည် အသားဖြူသော နွယ့်အား လှပအောင် ပံ့ပိုးပေးထားသည်။
“အမြဲတမ်းတော့ ပြုပြင်ပြီးနေပါ အမရယ်…cosmetic တွေလဲ ၀ယ်လို့ရတယ်နော်“
“ဟုတ်လား..အမ မသုံးတက်ဘူး သင်ပေးပါလား“
“ အို သင်ပေးလိုက်မယ် အမ လာ ကောင်တာကို“
ဆံပင်လုပ်တာနှင့် cosmetic ဖိုး အားလုံးပေါင်း တစ်ထောင်တန် နှစ်အုပ်လောက်ထွက်သွားသည်။
ဒီငွေတွေက မောင် အိမ်သုံးဖို့ပေးထားတာတွေထဲမှ နွယ်ဘာသာ ခြိုးခြံချွေတာစွာ စုဆောင်းထားသောငွေများဖြစ်သည်။
အခုတော့ နွယ်လှမှ ဖြစ်မည်လေ….ခွင့်လွှတ်ပါမောင်…..
ဆံပင်အရှည်ကြီးကို ရောင်းရသောငွေကို ရွှေတိဂုံဘုရားသို့သွားကာ ရွှေသင်္ကန်း ကပ်လှူပြီးဆုတောင်းခဲ့သည်။
“သာယာချမ်းမြေ့စရာ မိသားစုဘ၀လေး ပြန်လည်ပိုင်ဆိုင်ရပါလို၏ အရှင်ဘုရား“
တိုက်ခန်းတံခါးလာဖွင့်သော အဒေါ်မှာ မျက်လုံးပြူး၊မျက်ဆံပြူးဖြင့်
“နွယ် လှလား ဒေါ်လေး“
“လှပါ့ ဒါနဲ့ ဒီလိုလုပ်တာ မောင်နေမင်းကြိုက်ပါ့မလား…ဆံပင်ရှည်ကြီးတော့ သမျောစရာအေ“
“ဟင်းဟင်းဟင်း သူကြိုက်မှာပါ ဒေါ်လေးရဲ့….သားလေးရော“
“ဒါဆို နွယ်သွားနားလိုက်တော့မယ် ဒေါ်လေး“
အခန်းထဲရောက်တော့ သားလေးမှာ အပူအပင်မဲ့စွာ အိပ်မောကျနေသည်။
သားပါးပြင်လေးကို ညင်သာစွာနမ်းရင်းမှ နွယ်မျက်ရည်ကျလာသည်။
မငိုနဲ့တော့နွယ်..ညဉ်း အရင်လိုနွယ် မဟုတ်ရတော့ဘူး…
သားအတွက် ကြံ့ကြံ့ခိုင်တဲ့ အမေဖြစ်အောင် မေမေကြိုးစားနေတယ် သားရေ…
၀ယ်လာသောအလှပြင်ပစ္စည်းများကို နေရာချရင်းမှန်ထဲမှ နွယ့်ကိုနွယ်ကြည့်ရင်း ကျေနပ်သွားသည်။
အပြင်အဆင်များနှင့် နွယ်သည် အရင်လို ရွက်ကြမ်းရေကျို နွယ်မဟုတ်တော့….
နန်းကလျာဆိုတဲ့ မောင့်ကောင်မလေးကရော နွယ့်ထက်လှသလားမောင်……….
မောင်ပြန်ရောက်မည့်အချိန်ကို မှန်းရု နွယ်အပြင်ထွက်ခဲ့သည်။ဖုန်းကို စက်ပိတ်ထားလိုက်သည်။
မရောက်တာကြာသော ရှော့ပင်းစင်တာများသို့သွားကာ နွယ်ရှော့ပင်းထွက်၊မုန့်စားသည်။
ပျော်တာတော့ မပျော်ပေ။အရင်က အပြင်သွားမည်ဆိုလျှင် မောင်မပါပဲ နွယ်သွားလေ့သွားထမရှိပေ။
အခုတော့ နွယ်တစ်ယောက်ထဲပေါ့လေ….ည ကိုးနာရီထိုးခါနီးမှ နွယ်တက်စီ ဋ္ဌားကာ အိမ်ပြန်ခဲ့သည်။
“အေး ရောက်တာ ခုနှစ်နာရီထဲကပဲ ..ညဉ်း တခါမှ အဲလိုတစ်ယောက်ထဲ မထွက်သွားဖူးဆို..ဖုန်းလဲ ဆက်လို့မရဘူးတဲ့“
အခန်းထဲဝင်တော့ မောင်က တခါမှ မမြင်ဘူးတဲ့လူလို နွယ့်ကိုကြည့်သည်။
“ပုံပြောင်းလိုက်တာလေ မောင် …ဘာလို့လဲ မလှဘူးလား“
“အော် မောင်ကလည်း နွယ်လည်း မိန်းကလေးလေ လှချင်တာပေါ့“
“အိမ်ထောင်ပဲ ကျလို့ ကလေးပဲ ရနေပီ..လှချင်နေတုန်းလားကွာ“
“အော်…နွယ်မလှရင် နွယ့်ယောကျာ်းကို နွယ့်ထက်လှတဲ့ကောင်မလေးတွေ လုသွားမှာစိုးလို့ပေါ့“
မောင်ခေါင်းငုံ့လျှက်“အဓိပ္ပါယ်မရှိတာ…“ဟု တိုးတိတ်စွာ ပြောသည်။
“နယ်က သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် ရောက်နေလို့ အဲဒါ သွားတွေ့တာ“
မောင်နှင့် ရည်းစားဘ၀တုန်းက မောင်သ၀န်တိုခဲ့ဖူးသည့် နယ်မှသူငယ်ချင်းနာမည် ကို ရွတ်ပြလိုက်သည်။
ငါ့ကို ခွင့်လွှတ်ပါသူငယ်ချင်းရယ်..နင့်နာမည်ကို အလွဲသုံးစားလုပ်တာမဟုတ်ရပါဘူး..ငါတို့မိသားစု ဘ၀လေးအတွက်ပါနော်…
“သူနဲ့တွေ့ဖို့ မင်းက အဲလိုပြင်သွားတာလား…လှချင်သွားတာလား“
“ဘာလို့ ဒီအချိန်ကြီးတွေ့ရတာလဲ…ဖုန်းလည်းပိတ်ထားသေးတယ်..မင်းကိုယ်မင်း ကလေးအမေ အိမ်ထောင်သည် ဆိုတာရော သတိရသေးရဲ့လား“
“အော် မဟုတ်ပါဘူး..သူက မနက်ပြန်ရမှာ ဆိုတော့ ဒီအချိန်ပဲအားတာလေ“
“တော်ပီ မင်းကို ဘာမှ မပြောချင်တော့ဘူး…ယောက်ျားက အလုပ်ကပြန်လာရင် မင်းက ထမင်းဟင်း ခူးခပ်ကျွေးရမှာပေါ့“
“ဒေါ်လေးရှိတာပဲ…ပီးတော့ အခုမှ နွယ်အပြင်ထွက်ဖူးတာပါ..အရင်က မောင်ပြန်လာတိုင်း နွယ် အဆင်သင့် အမြဲခူးခပ်ကျွေးနေတာပဲ..မောင်သာ အပြင်က
“အေး အဲဒါဆို နောက်ညဘက် ဘယ်မှ မသွားနဲ့…မောင်လဲ စောစောပြန်လာမယ်..သွားစရာရှိရင်လည်း ပြော မောင်လိုက်ပို့မယ်“
“အင်း အခုတော့ နွယ်ပင်ပန်းနေပီ..အိပ်တော့မယ်မောင်“
“ဟွန်း လျှောက်သွားတုန်းက သွားပြီး အခုမှ အိပ်ချင်နေတယ်“
ပြောပြီး ဟိုဘက်လှည့်အိပ်သွားသော မောင့်ကို ကြည့်ရင်း နွယ်ရယ်ချင်လာသည်။
အော် မောင် တော်တော်လဲ အတ္တကြီးပါလား…သူ့အလှည့်ကျ ခံစားရမှာတော့ ကြောက်သား…
သ၀န်တိုနေတာ ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် မောင်သူမကို ချစ်နေသေးတာ ထင်ရှားတာပဲ..
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် နန်းကလျာကို အနေနီးစပ်မှုကြောင့်သာယာသွားတာလားမောင်…
အဲနောက်ပိုင်းတော့ မောင်သည် ချစ်စခင်စကဲ့သို့ နွယ့်ကို ဂရုစိုက်လာသည်။
အလုပ်ကလည်း စောစောပြန်လာသလို ဖုန်းဖြင့်လည်း ဘယ်မှာလဲ ၊ ဘာလုပ်နေလဲ မေးဖော်ရလာသည်။
တခါတရံ မောင့်အလုပ်သို့ လိုက်သွားကာ မောင့်အတွက် စားစရာများပို့လေ့ရှိသလို မောင့်အပေါ်အရမ်းချစ်သော မိန်းမအဖြစ် ရုံးမှ လူများကို သိစေခဲ့သည်။
အလုပ်နှင့်ပတ်သတ်သော ပွဲလမ်းသဘင်များသို့ မောင့်နှင့်အတူ လိုက်ပါကာ မောင့်အတွက် ဂုဏ်ယူရတဲ့ မိန်းမ အဖြစ် ရပ်တည်ပြီး မောင့်ရုံးမှ လူများနှင့် ခင်မင်ရင်းနှီးအောင်နေထိုင်ခဲ့ခြင်းဖြင့် မောင့်သတင်းတို့ကို တမင်စုံစမ်းစရာမလိုပဲ သိလာရသည်။
နန်းကလျာသည်လည်း အလုပ်မှထွက်သွားသလို မောင်နှင့်လည်းပြတ်ဆဲသွားပြီးဖြစ်ကြောင်း တစ်ယောက်စကားတစ်ယောက်နားဖြင့် ကြားခဲ့ရသည်။
အခုတော့လည်း မောင်သည် နွယ့်အတွက် ခင်ပွန်းကောင်းဖြစ်သလို၊သားအတွက်လည်း ဖခင်ကောင်းတစ်ယောက်အဖြစ်
အလုပ်မှာလည်း ဂုဏ်သိက္ခာရှိသော လူတစ်ယောက်အဖြစ် ရပ်တည်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ထို့အတူ နွယ်သည်လည်း
နွယ်သည်လည်း အလှပြင်မြဲ ပြင်လျှက်ရှိသလို မောင် နှင့် သားအတွက်လည်း ၀တ္တရားမပျက် တာဝန်ကျေပွန်သော
အိမ်ထောင်ရှင်မကောင်းအဖြစ် သာယာချမ်းမြေ့သော မိသားစုဘ၀လေးကို တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့သည်။
About La Yeik
La Yeik has written7post in this Website..
View all posts by La Yeik →	Blog
ခင်ဇော် says: Good…
La Yeik says: Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14410
kai says: happy ending ကြီးအတင်းလုပ်ထားသလိုပဲ…။
သမ္မတလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်နဲ့.. ၅နှစ်ကျအပြီး.. ထောင်ကအထွက်မှာ.. ၂လသားကလေးချီထားတဲ့.. မိန်းမကလာကြိုတာတို့.. ဘာတို့နဲ့.. ဇတ်သိမ်းကြည့်ပါလား..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 176
La Yeik says: အို….သဂျီးကလည်း ၅နှစ်ကြာမှ ထွက်လာတာကို ဘယ်က ၂လသားတုန်း… ပီးတော့ မိန်းမတွေကြမ်းရင် ယောကျာ်းတွေ အငယ်နောက်ပါသွားတာများတယ်လို့ ပြောတာ
မှတ်သားဖူးတယ်…ကိုယ့်ဘက်ပါအောင် ပြန်ဆွဲဆောင်နိုင်ရမယ်တဲ့…..ပီးတော့ ဥပဒေက ခုမှ တင်ပြတုန်း
ဘယ်အချိန်မှ အတည်ပြုမှန်း မှ မသိတာ ကိုး သဂျီးရဲ့…..
hmee says: ဆရာမ မစနာ​ရေးထားတဲ့ ဝတ်​ထုတို တပုဒ်​လည်း အရမ်း​ကောင်းတယ်​။ ​ဖောက်​ပြားလုလု ​ယောက်​ကျားကို ပြန်​ထိန်းပုံ​လေးကို ​ရေးထားတာပဲ။ ​မမှီက မစနာဆို အသည်းစွဲပဲ။ ​ကောင်းပါတယ်​ ညီမ​လေး​ရေ။
La Yeik says: ဟုတ်တယ် မမှီရေ…မိန်းမဖြစ်ရတာလည်း တယ်မလွယ်လှပါဘူး….ခုခေတ် အိမ်ထောင်ရှင်မတွေဆို ပိုဆိုးပေါ့
ယောကျာ်းဖြစ်သူနဲ့ ဒိုးတူဘောင်ဖက်လည်း ၀င်ငွေရှာရ…ယောက်ခမတွေ ကြည်ဖြူအောင်လည်းနေရ….သားသမီးရလာရင်လည်း ပြုစုစောင့်ရှောက်ရနဲ့..ဒီကြားထဲ ပေါများလာလိုက်တဲ့
ကေတီဗွီ၊မာဆတ်နဲ့စင်တင်တွေ….ကိုယ့်ယောကျာ်း တစုံတခု အမှားအယွင်းဖြစ်ခဲ့ရင်လည်း ကြိတ်မှိတ်ပီး သားသမီးမျက်နှာနဲ့ သည်းခံကြရတာ…ငယ်ငယ်တုန်းက အဖိုး မယားငယ်ယူတော့ အဖွားတစ်ယောက်တည်း
ကြိတ်ကြိတ်ငိုတာ တွေ့ဖူးတယ်….အရမ်းမုန်းတာပဲ အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်တာတွေကို….ဒါနဲ့ မစန္ဒာရဲ့
၀တ္ထုလေး နာမည်ပြောပါလား ဖတ်ချင်လို့ မမှီ….
တောင်ပေါ်သား says: တစ်ထောင်တန် ၂ အုပ် မတတ်နိူင်တဲ့ မိန်းမမျိုး ဆိုရင်ကော ?
ခြေငြိမ်သွားတာက ကိုယ့်ကြောင့်လား ဟိုတစ်ယောက်နဲ့ ပြတ်သွားလို့လား ၊ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 176
La Yeik says: တထောင်တန်နှစ်အုပ်မက ကိုင်နိုင်တဲ့ သူတွေရဲ့ ယောကျာ်းအများစုပဲ အဲဒလို ဖြစ်ကြသလားလို့…..ပိုက်ဆံအတွက်ကြောင့် မဟုတ်ရပါ ကိုကို ကို့ပဲ ချစ်လို့ပါ ဆိုတာကိုတော့ မပြောတက်တော့ပါဘူး အူးတောင်ပေါ်သားရယ်….အော် အခြစ် အခြစ်
တောင်ပေါ်သား says: ငွေမကုန်ပဲ ယောင်္ကျားထိန်းနည်းရှိသဗျှ ၊
နောက်မှ ပြောတော့မယ်နော့ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1191
Kaung Kin Pyar says: အယ်….စိတ်ဝင်စားသွားဘီ….
အူးမျိုးက ဘယ်ယောကျာင်္းကို ငွေမကုန်ဘဲ ထိန်းခဲ့တယ်ဆိုတာ…. င်င်
တောင်ပေါ်သား says: ကောင်းကင်ပြာ
အဲ့နည်း လိုချင်ရင် အလကားတော့ ရဘူးနော့ ၊ Was this answer helpful?LikeDislike 1191
Kaung Kin Pyar says: .လက်ရှိချစ်ချစ်က ထိန်းစရာမလိုဘူး….
Mr. MarGa says: ဒီ ဗျူဟာတွေကို ခံနိုင်ဖို့
တန်ပြန် ဗျူဟာတွေ ရှာထားရမယ်
La Yeik says: ပြောကို ပြောချင်တော့ဘူး ဒီလူဂျီးတွေဂို..ဂယ်ပဲ
Kaung Kin Pyar says: သူ့မှာလဲ ရုပ်ကျန်နေသေးလို့ဖြစ်မှာပါ့လေ…။
ဒီယောကျာင်္းမို့ပေပဲ….။ တချို့ယောကျာင်္းတွေများ…ခြံခုန်ပြီးရင်း ခြံခုန်ရင်း….လှတပတ..စမောလေးတွေ များလေတော့ ပိုက်ဆံသာ လက်ထဲရှိ၊ ဘယ်စမောရွေးရမယ်တောင် ဗျာများဦးမှာရယ်…
ယောကျာင်္းတွေလုပ်တော့ မိန်းမတွေမှာ ထိန်းရသိမ်းရ၊ တိုးတိုးတိတ်တိတ်ကြိတ်ငိုရ….အလှတွေ ပြင်ရ…
ဒီစာဖတ်ပြီး မိန်းမတွေ ဘွကို စိတ်နာတယ်…
La Yeik says: ပြောပြိုက် ညလေး…မြန်မာပြေက မိန်းမတွေဘွ ဘယ်လောက်စိတ်နာစရာကောင်းဒယ်ဆိုတာ….
surmi says: တစ်ခုလေးတော့ပြောချင်မိသေးဗျာ
ယောက်ကျားတွေ အပြင်မှာ ဖလန်းဖလန်းကြွတာ အိမ်ကမိန်းမတွေ အလှမပြင်တိုင်းတော့မဟုတ် ။
ဒီလိုဘဲ အိမ်ကမိန်းမ လှသွားနုသွားလို့လည်း အိမ်ပြန်ကပ်ခြင်းမဟုတ် ။
တကယ်တော့ မိန်းမအများစုဟာ ယောက်ကျားတွေအပေါ်နားလည်မှုတွေလွဲနေသေးသဗျ ။
အိမ်ထောင်ရေးဆိုတဲ့အပိုင်းဟာ အင်မတန်မှ သိမ်မွေ့နက်ရှိုင်းတယ် ။
နားလည်မှုတွေ အပြန်အလှန်ကူညီဖေးမမှုတွေ ၊
ရိုးသားပွင့်လင်းတဲ့သဘောထားတွေ ၊ သီးခံစိတ်ရှည် မျှော်မြင်တတ်မှုတွေ စသည် စသည် တွေအများကြီးနဲ့ ထုံမွှန်းမှသာ သာယာတဲ့အိမ်ထောက်ရေးဖြစ်နိုင်တယ် ။
ဒီနေရာမှာ မိန်းမအများစုက အလှအပဆိုတဲ့ လက်နက်တစ်မျိုးတည်းကိုသာထတ်ြသုံးဖို့ကြိုးစားတတ်တော့တာဘဲ ။
အသစ် အသစ်အလွန်ကြိုက်တဲ့ ယောက်ကျားအဖို့မှာတော့ အိမ်ကမိန်းမ ဘယ်လိုလှလှ မတူကွဲပြားတဲ့ အနေအထားနဲ့ဖေါက်ပြန်ကြဦးမှာပါ ။
ဒီနေရာမှာ မြို့ပေါ်က ယောက်ကျားများဖေါက်ပြန်တဲ့နည်းတွေက ခေတ်မှီဆန်းသစ်ပြီး နောက်ကြောင်းအတော်ရှင်အောင်လုပ်ထားတာတွေလဲရှိပါတယ် ။
ခတ်ထူထူယောက်ကျားတွေသာ ကိုယ့်ဇတ်ကိုယ်မနိုင်ဘဲ အိမ်ထောင်ကွဲကြတာ ။
ဒီလိုသဘောဆန်ဆန် အိမ်ထောင်ရေးဇတ်လမ်းတစ်ခုကို မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ရင်းပြီး ရေးထားတာရှိပါတယ်။
တစ်နေ့ကျရင်တော့ ဒီရွာမှာ တင်ဖြစ်ပါမယ် ။
လာရောက်ဝေဖန် သုံးသပ်နိုင်ပါကြောင်းးးးးးး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12381
ခင်ဇော် says: ယောကျာင်္းးးး ကိုပေါင်းးးရင်
မယားးငယ် အထာရော နဲ့ ပေါင်းးသင့်တာတို့ ဘာတို့….
နောက် အားးးမှ ရေးးပါအူးးမယ်လေ…….
La Yeik says: အို….အသစ်တွေ အသစ်တွေ:mrgreen:
La Yeik says: ဟုတ်ကဲ့ ရှိမှာပါ အူးဆာ….အူးဆာရဲ့ ဇာတ်လမ်းလေး လည်း စောင့်မျှော်လျှက် ရှိကြောင်းပါရှန့်….
kyeemite says: .ဇရာအိုနဲ့ကညာပျိုဇတ်ကားသတိရသွားတယ်..
♫♪♫ဆံပင်သစ်ကလေးနဲ့ လင်ချစ်ဆေးဖေါ်♪♫♪အို..ဟို..ဟိုဟို ..အိုမီဂါ…♫♪♫ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2898
ဦးကျောက်ခဲ says: ဆြာမိုက်… ရှေ့နောက်လွဲနေပြီ… စံရှားတင်ဂျီး ဆိုတာက…
♫♪♫ အိုမီဂါ… ဆံပင်အသစ်ကလေးနဲ့ လင်ချစ်ဆေးဖော်… မောင်ရေ… အိုး မောင့်…♫♪♫
♫♪♫ ခုတော့ဖြင့် မအိုသေး… အပျိုကလေးနဲ့တူ…♫♪♫ မောင်… လှတယ်မဟုတ်လားဟင်…
La Yeik says: Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1078
sorrow says: . အနေနီးတာတခုထဲနဲ့တော့မဆိုင်ပါကြောင်း…. ပထမပိုင်းကတဲကမန့်ချင်နေတာရယ်…
..အဟိဟိဟိ..ကိုယ်တွေများ..လစာလဲမဆိုး..ရုပ်ကလဲ …ရိန်းလိုလို..ထယ်စောက်လိုလို…ရာထူးကလဲမဆိုး…ကျပ်မပြည့်လို့လားတော့မသိ..ဘူဆိုဘူမှလာမကြိုက်..ရှိ…ထားတဲ့အမျိုးသမီးကြီးကျတော့လဲ ရိုက်မောင်းပုတ်မောင်းလုပ်လားလုပ်ရဲ့…
.အသဲများတောင်နာပါရဲ့….အဟင့်…ဗြဲ …ဟိုတောင်ကျွန်းကဆရာသမားကလဲ မိန်းမနိုင်ကျမ်း ပို့မယ်ဆိုပြီး ..ခုထိမပို့…အိုမီဂါ ဆံပင်အသစ်လေးလဲကျ ပြောတတ်လိုက်သေး…
La Yeik says: အို….ဘာတဲ့ စိတ်နာနေပုံများ….အာဟိ
CharTooLan says: မတိဘာဝူး ထောင်ကျသွားပလားလို့ ခိခိ
ဖတ်လို့အရမ်းကောင်းဒယ် ဇာတ်သိမ်းလဲကောင်းဒယ် အာ့ကမလွန်ခင်သဒင်းအကြားလေးပေါ့နော့်
လွန်ပီးကာမှသိတယ် ပြန်ထိမ်းမရဒေါ့ဝူးဆိုရင်ရော ဘိုလုပ်မလဲ ???? :D
La Yeik says: ဂလောက်ဆိုးတဲ့လူဖြတ်ပလိုက်တာအေးမယ်…
Yae Myae Tha Ninn says: ဘာမန့်ရမှန်းကို မသိဘူး.. ဦးဆာ ပြောတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေလဲ ရှိ… လရိပ်ပြောတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေလဲ မရိုးတမ်းကြားနေရပါသေးတယ်… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 176
La Yeik says: လူအမျိုးမျိး စိတ်အထွေထွေပေါ့ အူးလေးရယ်….ဒါက ပြဋ္ဌာန်းချက်မဟုတ်ရပါ….ဖြစ်တက်တဲ့ သဘာဝပါ…
ကန္နားစီး မိဂီ says: ယောက်ျားတေများ ..တယ်ခက်….
အာ့ကြောင့် ဒင်းတို့ကို ကျိမရတာ ..
ကျုပ်ဆို အသေသာခံလိုက်မယ် …
ယောက်ျား မယူဘူး… ဒီတသက်…
တို့နဲ့ .. တပြိုင်ထဲ
La Yeik says: အသက်ဒွေလဲ ကြီးပါဘီ အူးလေးရယ်…စိတ်လျှော့…င်င်
တောတွင်းပျော် says:ိမိန်းမက အခြားဘာအပြစ်မှမရှိပဲ အလှပြင်လိုက်မှ ယောင်္ကျားက
စိတ်ပြန်လည်လာတယ်ဆိုတော့မိန်းမကိုချစ်တာထက် အလှကိုချစ်တာ
ပိုဖြစ်လိမ့် မယ်။ ဇနီးမယားက ရုပ်ရည်မလှပေမယ့်သစ္စာရှိရှိလက်တွဲချစ်တဲ့လင်ယောင်္ကျားသားတွေလည်း အများကြီးရှိနေတာမို့နွယ့် ခင်ပွန်းရဲ့ စိတ်ဟာရေရှည်တည်တန့် နိုင်ပါ့ မလား တွေးမိတယ်။
တကယ်တော့ တည်မြဲတဲ့ အိမ်ထောင်ရေးဆိုတာ
တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး အပြန်အလှန်နားလည်ပေးနိုင်မှုက ပိုအရေးကြီးလိမ့် မယ်
ထင်ပါတယ်။ ဟိုအရင်ကဆိုရင် တောတွင်းပျော်အဖေ့ ဖက်က အမျိုးတွေ
က မိဘပေးစားလို့ယူကြရတာများတယ်။ ဒီထဲမှာ အချစ်မပါပဲပြုလိုက်
ကြတဲ့အိမ်ထောင်ရေးတွေက အများပဲ။ ဒါပေမယ့်ကွဲကြပြဲကြတယ်ရယ်
လို့မရှိလှ။ နှစ်ဖက်စလုံးက နားလည်ပေးမှုတွေနဲ့ ။
မဆိုင်တဲ့ အပေါက် ဂလိုင်နဲ့ ခေါက်
လူပျိုကလေးတောတွင်းပျော် ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်စကားလုံးတွေနဲ့ 
**တစ်ခါက thestar news မှာဖတ်လိုက်မိတယ်။ မလေးရှားရဲ့ 
ပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့trenganu က NGO အဖွဲ့ တစ်ခုက ပြည်နယ်တွင်း
ကောက်ခံရတဲ့စာရင်းအရ အချစ်မြဲတဲ့ အိမ်ထောင်သည်တွေဟာ ရေချိုးရင် အမြဲအတူတကွ ချိုးကြပါသတဲ့ **
La Yeik says: ဆိုလိုချင်တာက ဂလိုဘာ အူးလေးရယ်…ယောကျာ်းက ပွဲတက်မယားအဖြစ် ပွဲထုတ်ချင် မိန်းမက လူတောမတိုးချင်နဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှုမရှိဖြစ်နေချိန်မှာ ယောကျာ်းဖြစ်သူက သူဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒကို တခြားသော မ်ိန်းမ ကို သူ့မိန်းမနေရာမှာ အစားထိုးကြည့်တာပါ…တကယ်ချစ်တာကတော့ ကိုယ့်အိမ်က ချစ်မြတ်နိုးလို့ တရားဝင်ယူထားတဲ့မိန်းမပေါ့…ဒါကို မိန်းမအကြီးဖြစ်သူက ကိုယ့်အားနည်းချက်ကိုပြင်ပြီး
အစ်မတစ်ယောက်ပြောဖူးတာတော့ ယောကျာ်းရပြီးရင် ပိုအလှပြင်ရတယ်ဆိုလားပဲ…
အစ်ကိုတစ်ယောက်ပြောဖူးတာကျတော့ ငါ့မိန်းမကလွဲရင် ကျန်တဲ့ကောင်မလေးတွေ အားလုံးမိုက်နေတာပဲတဲ့
ဒါပေမဲ့ လူအမျိုးမျိုး စိတ်အထွေထွေပေါ့ အူးလေးရယ်….အူးလေးပြောသလို နားလည်မှု နဲ့ သစ္စာတရားသာ အရေးကြီးမှာပါ….
မီးတို့ ရေချိုးခန်းဆို ကျဉ်းတယ် အူးလေးရဲ့..၂ယောက်ဝင်လို့ရပါ့မလားတောင်မသိ…အာဟိ
တောတွင်းပျော် says: ကျဉ်းဒယ်ဆိုပေမယ့် လည်း
ကြိုးစားကြည့် ကြပေါ့ ကွယ်…
အန်တီကြီး မီးလေးရဲ့ 
အလင်းဆက်@မောင်သူရ says: အလှ ပြင်လွန်းတဲ့ မိန်းမတွေကို ကြည့်မရဘူး ။
အလှ မပြင်လွန်းတဲ့ မိန်းမတွေကိုလည်း မကြိုက်ဘူး ။
ဖွေးဖွေးက..အဲဒီ ကြားလေးမှာ ရှိတယ်.. ။
La Yeik says: ဟုတ်တယ် အူးသူရ…အလှပြင်လွန်းရင်လည်းမကောင်းသလို မပြင်ပြန်ရင်လည်း ကိုယ့်မှာ ရှိတဲ့ အလှပါ ပျောက်နေတက်တယ်…ဖွေးဖွေးကတော့ နဂိုလှကိုး အူးသူရရဲ့……
uncle gyi says: ဖွေးဖွေးလည်းမောင်သူရနဲ့မှညစ်ညစ်ဖြစ်တော့မယ်ထင်တယ်
La Yeik says: ကယ်တော်မူပါ မြတ်စွာဖျား…ဂယ်ဂျီးလား အန်ကယ်ဂျီးရေ….ဆုတောင်းကောင်းတယ် ပြောရမား
ဘိုပြောရမဲပေါ့နော်..ဂွစ်ဂွစ် (ခွက်ဒစ်တူ အူးသူရ)
ဦးကြောင်ကြီး says: မြရိပ်ညိုမှာ လရိပ်ခို ချဉ်လိုက်တာ… တူတူသွားကဲဂျဇို့..
La Yeik says: အမငီး…အူးကြောင်ဂိုကျောက်ထှယ် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3713
လုံမလေးမွန်မွန် says: ဖတ်ပြီးတာကြာပြီ.ဖုန်းနဲ့က မန့်ရတာ အဆင်မပြေလို့..
အဟုတ်ပဲ.. ယောက်ျားတွေများ တယ်အလှကြိုက်တာ… အခုခေတ်ဆို ပိုဆိုးသေး.. ကိုရီးယားကားတွေကြည့်ပြီး အိုးဆားဗစ်ကျားတွေကမှ ချိန်နေတဲ့ မိန်းမတွေက ရှိသေး… မျက်နှာပြောင်တိုက်ဖို့လည်း ဝန်မလေးဘူး.. သူများလင်ကိုလုလို့ ရှက်ရကောင်းမှန်းလည်း မသိဘူး… အိမ်က မိန်းမတွေဘဝများ သနားစရာ… အိမ်တွင်းအောင်းနေပြန်လည်း မဖြစ်.. အပြင်ထွက်ပြီး ပိုက်ဆံအတူတူရှာပြန်ရင်လည်း အချိန်မပေးလို့ဆိုပြီး တစ်ပြစ်.. တန်းတူလိုက်ညှိရင်တောင် သူတို့ကို တန်းတစ်ခုပေးထားပြီး ကိုယ်က နောက်က နေရပြန်ရော.. သူတို့ထက် ဆရာလုပ်တဲ့ မိန်းမမဖြစ်အောင်လည်း ဂရုစိုက်ရသေး.. ဟိ.. ဘာတွေလျှောက်ပေါနေပါလိမ့်.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 176
La Yeik says: အာ့ပြောဒါပေါ့ မွန်မွန်ရယ်….အလှမကြိုက်တဲ့ယောကျာ်းဆိုတာ မရှိသလောက် ရှားပါတယ်…
ပီးတော့ နောက်ကလိုက်တော့လည်း မင်းက ၀န်ထုပ်ဝန်ပိုး ရှေ့ကသွားပြန်တော့လည်း
မင်းက ဘယ်လောက်တက်လို့ ငါ့ကိုဆရာ လုပ်တာလဲ ဖြစ်ရပြန်ရော
အော် ဒုက်ကထ ဒုက်ကထ….